Uhlelo lokuhlunga oluzenzakalelayo lwe-automatic system lwe-DFX yochungechunge - I-China Backwashing uhlelo lokuzenzakalelayo lokuhlunga lwe-DFX lwe-China, i-Factory -Sffiltech
Ukwenza i-backwashing automatic system ye-DFX yochungechunge
Uhlelo lokuhlunga oluzenzakalelayo oluzenzakalelayo
Uchungechunge lwe-DFX lokuzenzakalelayo oluphelele oluzenzakalelayo
I-DFX yochungechunge lokuzihlanza lokuhlanza izindlu (Isihlungi se-DFX ngamafuphi) yi-DKD yocwaningo oluzimele kanye nentuthuko yokuzihluza esebenza kahle yokuzihlanza, ngendlela yokufafaza ngomshini yokuhlanza ngokuzenzakalelayo inhlanzeko yangaphandle yento yokuhlunga, ikwazi ukuqhubeka -I-fterration Izindlu zokuhlunga ze-DFX ikakhulukazi zisetshenziselwa ukuhlunga okuphezulu kokucaca, ububanzi bokunemba obungu-50-500. Yiba namandla okufika ezingeni eliphezulu lokugwema ukufafaza ukungcola, ngakho-ke ukususwa okusebenzayo kokungcoliseka okwengeziwe, okulungele ukugcwaliswa okungaphezulu kwe-fluid viscosity, viscosity kuze kufike ku-800000 CPS. Isihlungi se-DFX silandela ukusebenza okuphezulu kwe-DKD, ikhwalithi ephezulu, ukwakhiwa okuthembekile okuphezulu namazinga wokwenza, kufinyelelwe ikhwalithi yokuqala yamazwe omhlaba.
I-DKD ingumkhiqizi ohamba phambili wokuzihlanza we-car, unochungechunge oluphelele lwemikhiqizo yokuhlunga yokuzihlanza, uchungechunge oluphindwe kathathu, olusebenza ngezikhathi ezihlukene, ukuhlangana ngokugcwele namakhasimende wezezimboni ahlukahlukene wezidingo zokuzihlunga ezingahlanzeki.
Isimiso sokusebenza sendlu yokuhlunga ye-DFX
Hlunga ingxenye yesiphambano
Isihlungi sezinto zokuhlunga
Into yokuhlunga ephezulu yokusebenza ye-V-SLOT ephezulu
Izindlu zokuhlunga ze-X chungechunge lwe-XF zifakwe izinto ezisezingeni lokuhlunga ze-V-SLOT ezisezingeni eliphakeme kakhulu emhlabeni, kunezinzuzo ezivelele ezilandelayo:
1) Ububanzi bama-microns u-50-500;
2) Ukucaciswa kobubanzi be-seam, ukuphambuka kungaphansi kwama-5 microns;
I-3) i-Main body 316L impahla, ukumelana okuhle kakhulu kokugqwala;
4) V hlobo slot, okungelula ukufa ukungcola, ukugeleza kwesikhathi eside okuzinzile;
5) Ingaphandle elingaphezulu nendawo yangaphakathi ebushelelezi, kulula ukuyikhipha, ukugqokwa okuncane kokukhuculula;
6) Ingakwazi ukuhlunga ukungcola okunenkani, njengokungcola kodaka nokungcola okuthambile;
7) Ingaphezulu liphathwe ngokukhethekile nokuqina kokuqina, futhi impilo yenkonzo ihlala isikhathi eside ngokumangazayo;
8) Isakhiwo samandla aphezulu, ukunyuka kwengcindezi engafani, igebe aligcini;
9) Ukubekezelela ukuqina okukhulu ngaphambili nangasemuva kwengcindezi;
Izici zobuchwepheshe nezinzuzo
1) Ukusebenza okuzenzakalelayo okugcwele, amahora angama-24 wokuhlunga okuqhubekayo kwe-inthanethi, ukuqeda isisetshenziswa sokuhlunga esindayo nomsebenzi wokuhlanza;
2) Izindleko zokuvikela ezibonakalayo nezokuvikelwa kwemvelo, ezingabonakali njengezinto ezingasetshenziswa.
3) Kusetshenziswa isicwecwana sephepha lensimbi, umphumela omuhle kakhulu, amandla okususa ukungcola athuthuke kakhulu futhi ugweme ukungcola okungcolile;
4) Into ephezulu yokuhlunga ye-V-SLOT yekhwalithi ephezulu, ukunemba kwegebe, indawo ebushelelezi ebushelelezi, kulula ukuyipula, amandla aphezulu, impilo ende;
I-5) Ukulahleka kwengcindezi yokucindezela kuncane kakhulu, ukugeleza kuzinzile, ukonga amandla, futhi kufanelekile kubuchwepheshe obuzinzile;
6) Ungangezwa umsebenzi we-backwashing, umsizi wokuhlunga wokusiza;
7) Ukuhlunga okuvalekile, ukuvimbela ukuvuza kwezinto eziyingozi, kufanelekile ekukhiqizeni okuphephile;
8) Ukuphakelwa okuphezulu koketshezi lokudoti kungaphindwa kusetshenziswe kabusha, ukuvikela ukulahleka kwezinto ezisezingeni eliphakeme;
9) Izinhlobonhlobo zokuhlanganiswa kwemodyuli nemodi ezenzakalelayo, ukuze ihlangabezane nezidingo zokuhlunga okuhlukahlukene;
10) Izinga le-brand eyaziwa ngokuthi yi-brand brand eyenzelwe imoto, ukuthembeka okuphezulu, impilo ende yenkonzo;
I-11) ejwayelekile inedivaysi yokuphakamisa ikhava esizayo, umuntu oyedwa angasebenza kalula